Beerta SOO SAARIDDA SOO SAARIDDA SIYAASADAHA BULLESALE, Raw Turquoise | Zh gems
ZH GEMS - Soo-saareyaasha Turquoise Count-ka iyo shirkadda dahabiga ah ee Weyn ee Turcone
0 Companies Turquoise Block
1 Qalabka adag ee ceeriin
2 Beerta Turquoise
2-1 Turquoise wareega
2-2 Turcooise Rondelle / Abacasus Boods
2-3 Xerada Balqueoise
2-4 Geedka Ovoise Oval
2-5 Turquoise Brick / Square Square
2-6 Turquoise Heishi Giishi
2-7 Beerta Nuquoise Nugget
2-8 durbaanka durdurrada turquoise
2-9 Chips Turquoise
2-10 Turquoise goobo goobeed / Donut Boodhs
2-11 Xirfadaha Qalbiyeedka
2-12 Xirmooyinka Turquoise
2-13 Weerarka Turquoise
2-14 Geedka Turquoise Tube
2-15 Turquoises-ka ayaa wajiga soojiray
2-16 Xirmooyinka Turquoise
2-17 Beeraha bocorka turkiga
2-18 Xeebta Rice ee Bariise
2-19 ukunta ukunta ee ukunta
2-20 pinats tungoos
2-21 Awoodda carrabka turkies
2-22 guntin ruq oo eyga ah
2-23 Xirmooyinka Turquoise Buddha
2-24 Xargaha rasaasta ee Turcoise
2-25 Burnish jeexjeexyada Turquoise
2-26 Xeebaha Turquoise
3-1 Turquoise Rouchron wareega
3-2 turkies oval cabalon
3-3 Turquoise Pear Cabochochon
3-4 Turquoise Marquist / Navette Capochon
3-5 nabaro labajibbaarane oo tugo oo labajibbaaran
3-6 CASOCOOIS TUCOOISE WUWCOISE CASOChon
3-7 Turquoise trapezoid caprocon
3-8 tufaax aan caadi ahayn oo carochon ah
Turquoise Turquoise Traanglor CaboChon
Cabooise Turquoise-ka Turquoise
Turquoise qalbi Crochon
4 Turquoise Shorted & ornamental
5 dahabka Turquoise
Turquoise Belle / jiji
Qaabka dadka kale ee turquoise
6 gemstone ab
7 gemstone guluus
9 gemstone xamuul & ornamental
10 Gemstone qoorta
11 gemstoone boodle
12 jijin gemstone
13 gemstone dheduudka
14 gemstone perent
15 giraan giraan ah
16 Gemstone ayaa dejiyey dahabka
17 Gemstone qaabka kale
18 qalin / dahab / dahab qurux badan
Nuqullada macdanta ah
Warshadda iyo xafiiska iibinta
Tijaabada dib u soo celinta
Wax soo saarid
Waxsoosaarka farshaxanka ee nidaamka Vedio
Geedi socodka wax soo saarka Vedio
Geedi socodka dhagxaanta ee Soosaarka Vedio
Soo-saare farshaxanka fiidiyowga
Tus qolka Vedio
Maxaad naga soo iibsataa
dhab DABIICIGA AH
ZH GEMS waa qeybiyaha ah ee hormuudka ka ah sumurud dabiiciga ah dhagaxyo ceeriin iyo dahabka gemstone ee Shiinaha muddo ka badan 15 sano.
Gaarka ah ee anigaa iska sumurud, iyo dhagaxyo sumurud cayriin, sumurud, iyo noocyada kala duwan ee kuul gemstone, wareega kuul, sawirro, murriyado, dugaagado, bangles, iyo hilqado, murriyadihii, siddo iyo beeraha kale dahabka.
Hab loo qabid
Heer sare ah& farshaxanimada quruxda badan ee dahabka ah
Isku darka farshaxanka dhaqameed& Farshaxanka dahabka ee casriga ah
Xoogga saar gacmaha gacmaha dabiiciga ah& asalka dhabta ah
Si adag looga hubiyay tayada ka soo baxa qallafsan, daaweyn, gooyn, naqshad, waxsoosaarka gudaha ah ee loo maro imtixaanka tayada& keenis
Baadh OUR SAARKA Range
All Turquoise iyo gemstone dahabka gudbin karaa imtixaanka GIA, noocyada kala duwan ee kuul sumurud waa caan ah suuqa caalamiga ah, Waxaan sidoo kale bixinnaa turquoise cayriin.
ZH GEMS waa qeybiye keentay dabiiciga ah cayriin dhagax sumurud ee Shiinaha tan iyo sannadkii 2010, dahabka albaabkaa saarayaasha jumlada iyo shirkadda gemstone.
Turquoise iyo noocyada kala duwan ee kuul gemstone, cabochons, xardhay, 925 Sterling gemstonejewelry lacag ah, 14k / 18k / 24k gemstone qurxiyo for tiro mass ka dhigi jumlada ee marketing dunida.
SAARKA DHEERAAD AH
qaabka munaaraddii Dabiiciga Fluorite Minimalist macaan silsilad 20 inch size ka 6-13mm
100% gemstone Dabiiciga for dahabka
Multi Dabiiciga Tourmaline silsilad Multi Color silsilad dhererka qaab munaaraddii 18 inch size ka 4-12mm
lohod spiny Dabiiciga ah iyo size silsilad gemstone amazonite ka 16inch dhererka 5-12mm
Caato ah Dabiiciga ah way nacdaa Turquoise Tower Qaab 4-8mm silsilad dhererka size 16inch
Jijin Dhalashada Turquoise Dabiiciga Gift jijin Small jijin Bogsiiyey Jewelry
Dabiiciga ah silsilad lohod spiny, dhererka 16inch, 4mm size, 6mm, 8mm, 10mm
Waxaan bixinaa qaabab gaar ah si ay u sameeyaan xiiso leh dahabka abuurka dheeraad ah iyo adventurous waayo fanaaniinta dahabka. Waxaan u nugul yihiin dalabka suuqa oo aad jawaabaha deg deg ah, oo diiradda saaraya siinta alaabta kharash-ool ah kartoo iyo adeeg macaamiil oo tayo sare leh.
Xaqiiji amarka wax ka da.ay, tayada, size, qaab, dulqaad, style, farsamada, tirada, waqtiga dhalmada, jadwalka shixnad. cutubyo badan oo wax soo saarka la taagay si loola dagaallamo baahida baxna alaabta
Samaynta design ay barbaro galeen CAD ama style modle si loo xaqiijiyo double sida loo sameeyo ay si sax ah fariin.
Raac aan u xaqiijineynaa fariin saxda ah si uu u furo model ama ka dhigi lagu dumiyo.
Samee tusaalooyinka QA caadiga ah si loo xaqiijiyo alaabta mass fasax tayada heerka, waxaan ka dhigi doonaa saddex kaarka tayo leh, taas oo ka mid ah waxaa loogu tala galay shaqaalaha kooxda QC; mid waa kooxda QC macaamiisha, mid saddexaad waa waaxda soo saaridda our.
Raac Xaqiijisay baarka QA Heerka soosaarka alaabta tiro mass.
Si taxaddar leh Curated
Laga soo bilaabo mid ka mid ah lover sumurud in kale.
Waxaan ku faanaa in doorashada dhagaxyo cajiib ah, waayo abuuray inay ku raaxaystaan.
technology Shenzhen Hong Zheng ku koobnayn ayaa la aasaasay muddo ka badan 15 sano. Shirkadda ayaa sidoo kale horumar joogto ah. Waxay leedahay warshad gaar ah iyo abuuray ZHgems brand u gaar ah. Waxaan diirada saareynaa dahabka dabiiciga ah ee dhabta ah iyo kuwa dhabta ah ee turkiga. ZH GEMS waa qeybiye gemstone run, siinta-dhamaadka sare xunxunna sumurud iyo kuul sumurud, dahabka albaabkaa. Haddii aad raadinayso dahabka albaabkaa saarayaasha jumlada ama meelaha alaabooyinka dhagax sumurud, noo soo xiriir.
Dhammaan alaabta aannu shirkadda ee (sumurud, iyo dahabka gemstone) ayaa la tijaabiyey by GIA. Waayo, wax soo saarka, waxaad ka iibsan kartaa si kalsooni leh. kuul sumurud Our shirkadda ayaa aad loo jecel yahay suuqa caalamka. Waxaan sidoo kale ku siin sumurud isticmaalin.
15 sano horseedka curinta iyo Ka dib, saamiga aad suuqa iyo sumcad of ZHgems isku qurxiyo ayaa si weyn u soo hagaagtay, iyo nidaamka adeegga tayo sare leh iibka kadib waxa ay si joogto hagaagtay daacad macaamiisha. Fikradda ah dahabka caadadii gaar ah ayaa la soo bandhigay galay aragtida macaamiisha. In meel keentay in suuqa ...
technology Shenzhen Hong Zheng ujeedooyinka ku koobnayn"dhexgalaan adeegyada ganacsiga iyo iibsiga caalamka, iyo ku dadaalaan in ay noqon Shiinaha's fasalka-koowaad ganacsiga shisheeye shirkad caalami ah oo warshad", la"caalami ah oo qaab-dhismeedka, maamulka hufan, kharash la safeeyey, iyo horumarinta xasiloon oo xubnaha kooxda.""Xiriirka Macaamiisha si loo gaaro muddo dheer guul-guul" sida falsafada maareynta ganacsiga, iyadoo la raacayo xeerka sinnaanta iyo lacagta labada dhinac, ay sii wadaan si loo ballaariyo ganacsiga ganacsiga kala duwan, iyadoo wax soo saarka oo tayo sare leh, qiimaha macquulka ah, hufnaan-xawaaraha sare, iyo ku dadaalaan si ay u buuxiyaan shuruudaha kala duwan ee macaamiisha, ka go'an in ay kasta Fang adeegga saaxiibo diiran.
Customer koowaad waa in wax walba waa macaamiisha u janjeedha, faa'iido u ah macaamiisha, si ay u siiyaan macaamiisha adeegyo tayo sare leh, si ay macaamiishu dareemaan istaahilaa magacyadooda.
Isticmaal foomka xiriirka on our faahfaahinta xiriirka bogga ama na soo wac si dheeraad ah uga wada hadlaan wax soo saarka this.
Dhammaan alaabta aannu shirkadda ee (sumurud, iyo dahabka gemstone) ayaa la tijaabiyey by GIA. Waayo, waxyaabaha our
Wajiga lagu wajaho sameynta dahabka
Alaabada dhowaan la bilaabay
Qurxinta Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah ee Madaw ee loo yaqaan 'Gemstone Gemstone' ee Dabiiciga ah
Shenzenen Hongzheng Cognology Co., Ltd. waxaa lagu aasaasay Shelzhen, Shiinaha bishii Juun 2010
Akhri wax dheeraad ah>>
La xiriir: Annahe
WCHTAT: +86 13751114848
Cinwaanka Warshadaha: Guangjingtou, degmada Qingxi, Magaalada Dongguan, Shiinaha.
Fiiri la yaabka, fadlan la tasho macaamiisheenna.